May 13, 2020 - Lupyo News
May 13, 2020 by Lupyo News
အခြေခံပညာကျောင်းများ ဇွန်လ၌ဖွင့်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ (ဆရာ/ဆရာမ) အသင်းချုပ် (MTF) ပြော အခြေခံပညာကျောင်းများ ဇွန်လ၌ ပြန်ဖွင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာ/ဆရာမ အသင်းချုပ်မှ ဦးအေးမင်းထိုက်ကပြောသည်။ ကျောင်းသားများ၏ အဖြေလွှာစစ်ဆေး မှုများအောင် စာရင်းထွက်မှု ဒသမတန်း စာစစ်မှုပင် လုပ်ဆောင်မှုမပြု လုပ်ရသဖြင့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ “အဖြေလွှာတွေ မစစ်ရသေးဘူး ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အောင် စာရင်းထုတ်ဖို့ လိုတယ် အရေးကြီးဆုံးက ဆယ်တန်းအ ဖြေလွှာတွေမှ မစစ်ရသေးတာ အဖြေလွှာတွေက အထက်တန်း ပြတော်တော် များများ သုံးပြီးစစ်ရတာ။ ဆယ်တန်း အဖြေလွှာတွေ မပြီးသေးတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ မရလောက်ဘူး”ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ/ဆရာမ အသင်းချုပ်မှ ဦးအေးမင်းထိုက်ကပြောသည်။ ကျောင်းများတွင် Quarantine ထားရှိသူများရှိနေပြီး ၎င်းတို့၏ … Read more
နန်းစုနဲ့ ပြတ်သွားပီး သနားစရာကောင်းတဲ့ G-Fatt
နန်းစုနဲ့ ပြတ်သွားပီး သနားစရာကောင်းတဲ့ G-Fatt ဘယ်သူကမှန်တယ် ဘယ်သူကမှားတယ်လို့ ကျုပ်တို့မှာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဖူး ဝေဖန်လို့တော့ရတာပေါ့ သူတို့မှာလဲ သူတို့အကြောင်းတော့ရှိမှာပေ့ါ ဒါပေမယ့် တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ရူးလောက်အောင်ချစ်ခဲ့ကြတယ် အသက်နဲ့ထပ်တူချစ်ခဲ့ကြတယ် တိုင်းသိပြည်သိချစ်ခဲ့ကြတယ် ပိုက်ဆံမရှိလို့ လမ်းခွဲကြတာလဲမဟုတ် မချစ်မနှစ်သက်တော့လို့ လမ်းခွဲကြတာလဲမဟုတ် အဲ့ဒါဆို ဘာလဲ ဖောက်ပြန်လို့လား ဖောက်ပြန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေလဲမကြားမိ အဲ့ဒါဖြင့် ဘာလို့လမ်းခွဲကြတာလဲ ချစ်နေရက်နဲ့ မာနတွေအပြိုင်ထားနေကြတာလား တကယ့်အချစ်စစ်မှာ မာနတွေ မာန်တွေ မရှိပါဖူး မင်းလူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိပီဆိုရင် တကယ်ချစ်ဖူးရင် သိလိမ့်မယ် ချစ်သူတွေကြားမှာ အဓိက ရန်သူက မိဘတွေလဲမဟုတ်ဖူး ပိုက်ဆံလဲမဟုတ်ဖူး ဂုဏ်ပကာသနတွေလဲမဟုတ်ဖူး မာန်မာနတွေပဲ အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို အသည်းကွဲစေတာက မာန်မာနတွေပါပဲ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဘယ်တော့မှ မာန်မာန မထားမိပါစေနဲ့ ထားတဲ့သူတွေ သေချာပေါက် ဇာတ်သိမ်းမှာပဲ။ … Read more
( ၁၅ ) ရက်နေ့ ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ သူ/သားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ
( ၁၅ ) ရက်နေ့ ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ သူ/သားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ #Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ( ၁၅ ) ရက်နေ့ ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ သူ/သားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ ရန်ကုန်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်တော့မည်။ဆိုင်ထိုင်သုံးဆောင်ခွင့်တွေပြန်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ(၁၅)ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီး ရန်ကုန်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေကို ပြန်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘီယာဆိုင်တွေ၊ နိုက်ကလပ်တွေနဲ့ ဘားတွေကိုတော့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုအုံးမှာ မဟုတ်ဘဲ အခြေခံလူတန်းစာတွေရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လိုမျိုးတွေကို ဆိုင်ထိုင်သုံးဆောင်ခွင့်တွေပြန်လည်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်လှိုင်ဝင်းက Duwun ကိုပြောပါတယ်။ “ အဓိကကတော့ အိမ်ထဲမှာ အကြာကြီးတင်းကြပ်နေနေရတဲ့အခါကျတော့ ငြီးငွေ့လာမှာစိုးသလို စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်အောင်ပါ။ ပြည်သူတွေက ဆိုင်ထိုင်ပြီး စားလို့ရမယ့် စားသောက်ဆိုင်လိုမျိုးတွေကို စည်းကမ်းချက်တွေအညီ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမှာပါ။ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ဖွင့်လှစ်ရမယ်ဆိုတာ တိုင်းအစိုးရက ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပြီး … Read more
၄၈နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် မုန်တိုင်းသတင်း
၄၈နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် မုန်တိုင်းသတင်း ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောနဲ့ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျမှာဖွဈနတေဲ့ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးဟာ ပိုမိုအားကောငျးလာပွီး နောကျ ၂ ရကျအတှငျး မုနျတိုငျးငယျဖွဈလာနိုငျတယျလို့ မိုးလဝေသနဲ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာနက ခနျ့မှနျး ထုတျပွနျပါတယျ။ ဒီနေ့ နလေ့ယျ ၁ နာရီခှဲအခြိနျတိုငျးထှာခကျြတှအေရ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျော အရှတေ့ောငျပိုငျးနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျတောငျပိုငျးတို့မှာ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးတခု ဖွဈပျေါနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒီလဖေိအားနညျးရပျဝနျးဟာ ပိုအားကောငျးလာပွီးနောကျ ၄၈ နာရီအတှငျး မုနျတိုငျးငယျ(Depression)အဖွဈ ရောကျပွီး ကနဦးမှာတော့ အနောကျမွောကျဘကျကို ရှလြေ့ားနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ DVB TV News ————————- zawgyi code ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး နောက် ၂ ရက်အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ခန့်မှန်း … Read more
သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေ၊ အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေ၊ အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေ၊ အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် ” လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ်” ကလင်.……… ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်။ ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်။ မွေးထားတဲ့သားသမီး ၃ ယောက်ထဲမှာ “သမီးသီလရှင်လေးကအကြီးဆုံး သားလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူတကွနေတာပေါ့သမီးလေးကို ၁၀ နှစ်အရွယ်တည်းကသီလရှင်ဝတ်ပေးခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းမှာဘုရားစာပါဠိတွေကိုသင်ယူစေခဲ့တယ်။ သမီးလေးအဖေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အလုပ်သွားလုပ်ပီး မိခင်တစ်ယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာကိုသနားလို့ထင်ပါတယ် သမီးကဒီနှစ်မှလူထွက်မယ် စကားကိုပြောတော့ ဒေါ်တင်မေခင်များမှာ ငိုရမလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ သမီးလေးကိုတော့ချော့ပြောလိုက်တာဘဲရွာကိုအရောက်တော့ပြန်ခဲ့အုံးလို့ မှာလိုက်တာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး သီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးနှင့်ဘဲပြန်ခဲ့ပါစေဘုရား ဆိုပြီး … Read more
အမေရိကန် မှာ လူသား နဲ့ စတင် စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ပထမအဆင့် အောင်မြင် အမေရိကန်ကိုရိုနာ ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုနောက်တဆင့် တက်လှမ်း ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအလယ်လောက် မှာ ကာကွယ်ဆေး ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Seattle မှာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပေါ့။ ဘယ်တုန်းကဘယ်လိုစမ်းသပ်တာလဲ⁉️ အဲ့ဒီ RNA vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်အစိုးရ National Institute of Allergy and Infectious Disease နဲ့ Moderna တို့ ပေါင်းစမ်းသပ် တာပါ။ လူ ၄၅ ယောက်ကို mRNA-1273 ပေးပြီး March 19 အထိလူစုစမ်းသပ်ပါတယ်။ April မှာ Alanta နဲ့ Georgia … Read more
(၄)တန်းကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရုံသာမက ရက်ရက်စက်စက်သတ်ပစ်တဲ့ အမျိူးသား
(၄)တန်းကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရုံသာမက ရက်ရက်စက်စက်သတ်ပစ်တဲ့ အမျိူးသား မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သိမ်ဖြူဂုံးကျော်တံတားအောက်(၄)တန်းအသက်(၉)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အားမုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသူတရားခံကြယ်ကြီးအားမဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိပြီး (၁၁.၅.၂၀၂၀)နေ့တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တရားရုံး၌ပုဒ်မ(၃၆၃/၃၇၆/၃၀၂) တို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒီလို မဒိန်းကောင် စေက်ခွက်ကို အားလုံးမြင်ရအောင် မျှဝေပေးဗျာ ဒီလို အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေ မရှိရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ မြန်မာပြည်ရယ်.. Via : ဖို့မြေရပ်ကွက်ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း H.H ——————————- Unicode မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ၊ သိမျဖွူဂုံးကြျောတံတားအောကျ(၄)တနျးကြောငျးသူအသကျ(၉)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးငယျအားမုဒိနျးကငျြ့သတျဖွတျပွီး ထှကျပွေးလှတျမွောကျနသေူတရားခံကွယျကွီးအားမဂျလာတောငျညှနျ့မွို့နယျပွညျသူ့ရဲတပျဖှဲ့မှ ဖမျးဆီးရမိပွီး (၁၁.၅.၂၀၂၀)နတှေ့ငျ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျတရားရုံး၌ပုဒျမ(၃၆၃/၃၇၆/၃၀၂) တို့ဖွငျ့တရားစှဲဆိုခဲ့ပါသညျ။ ဒီလို မဒိနျးကောငျ စကျေခှကျကို အားလုံးမွငျရအောငျ မြှဝပေေးဗြာ ဒီလို အဓမ်မပွုကငျြ့မှုတှေ မရှိရငျ ဘယျလောကျကောငျးလိုကျမလဲ မွနျမာပွညျရယျ.. Via : ဖို့မွရေပျကှကျဥက်ကဌ ဦးဇျောဝငျးထှနျး CREDIT
အဆက်ဖြတ်သွားတဲ့ ချစ်သူကို လည်ပင်း ဓားနဲ့လှီးပြီး ရဲစခန်းမှာ ကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
အဆက်ဖြတ်သွားတဲ့ ချစ်သူကို လည်ပင်း ဓားနဲ့လှီးပြီး ရဲစခန်းမှာ ကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား အသက် (၂၀) အရွယ်အမျိုးသမီးရဲ့ လည်ပင်းကို ဓားနဲ့လှီးပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုယူကာ ရဲစခန်းမှာ ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့သူ (၁၃.၅.၂၀၂၀) နေ့နံနက် (၈း၃၀)အချိန်ခန့်တွင်မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့| မြို့မ(၄)နယ်မြေ ကျွန်းရွာလမ်းသွယ် ဗိုလ်တေဇလမ်းကြားတွင်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးစကားများနေခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ စကားများကြရာမှ အမျိုးသားမှ ဓားဖြင့် အမျိုးသမီး၏လည်ပင်အားလှီးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး၏ဆိုင်ကယ်ကိုယူကာမုဒုံရဲစခန်းတွင်သွားရောက်အဖမ်းခံကြောင်းသိရှိရပါသည် ဓားလှီးခံရသောအမျိုးသမီးမှာ ကျွန်းရွာလမ်းနေသူ မသဇင်ဖူးဝေ(၂၀)နှစ်ဖြစ်ပြီးလူနာအားဆေးဆက်လက်ကုသရန် “မုဒုံအရေးပေါ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ “MERTမှ မုဒုံ​ဆေးရုံမှတဆင့်မော်လမြိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းကနဦးသတင်းရှိပါသည် မွန် မေ ၁၃ #အမွှာညီနောင် မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့ မြို့မ(၄)ရပ် အခွန်လွတ်ဈေးအနီး ယနေ့နံနက် ၈ နာရီချိန်ခန့်၌ ဓားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ မောင်ဇေယျာကို ၂၃ နှစ်(မကွေးမြို့နေသူ) သည် … Read more
စိတျညဈတဲ့အခါ ကုသိုလျတရားနဲ့ပဲ အာရုံပွောငျးလိုကျပါ
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲ အာရုံပြောင်းလိုက်ပါ စိတ်ညစ်ရင် ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲ အာရုံပြောင်းပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံး အဆိုးလောကဓံကို ဘယ်သူမှ မကြုံချင်ကြဘူး… ဒီတော့ ကြုံလာရင် စိတ်ညစ်မယ်…ပုထုဇဉ်ပဲ ညစ်ပေါ့… အေး…ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ညစ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ကြဖို့ပဲ… စိတ်ညစ်စရာလည်းညစ်…တစ်နေ့တာ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလည်း လုပ်ပေါ့…အဓိက,ကတော့ စိတ်ညစ်စရာ ရှိပေမယ့် တစ်နေ့တာ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ဒါန သီလ ဘာဝနာဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တရားအလုပ်လေးတွေ ပျက်မသွားဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်နော်… ဒီတော့ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကတော့ ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲ အာရုံပြောင်းလိုက်… ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ——————————— unicode စိတျညဈတဲ့အခါ ကုသိုလျတရားနဲ့ပဲ အာရုံပွောငျးလိုကျပါ စိတျညဈရငျ ကုသိုလျတရားနဲ့ပဲ အာရုံပွောငျးပေးလိုကျတာ အကောငျးဆုံး အဆိုးလောကဓံကို ဘယျသူမှ မကွုံခငျြကွဘူး… ဒီတော့ ကွုံလာရငျ စိတျညဈမယျ…ပုထုဇဉျပဲ ညဈပေါ့… အေး…ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ ညဈပွီးရငျတော့ … Read more